Grass besisika | Triploid Grass besisika
Triploid Grass besisika
Ny hany ilainao ho fantatra momba ny ahitra besisika
Tompon'andraikitra mpitantana rehetra farihy dia hanara ny andraikitry ny fitantanana sy ny tafio-drivotra farihy dobo rano amin'ny fomba izay dia sady mahomby vola lany-dia mahasoa koa ho ny mpanjifa. Ankoatry ny, ny fitantanana ny farihy sy ny tafio-drivotra dobo rano ny tontolo iainana mila ho sariaka ny hihaona Eco-rafitra fepetra arahana. Mba hahafeno an'ireo fepetra ireo, dia ilaina ho fampiharana maro samihafa-faceted tetikady mampiasa fitaovana mahasoa hatao ny asa atao. Tontolo iainana dia zara raha nahazo iray mampiasa fomba fiasa, ary tsy misy mahay mandanjalanja zara raha misy vokatra tsara.
A biolojika fanaraha-maso dia manondro ny fampiasana ny fomba voajanahary mba hahazoana ny fitantanana naniry kendrena amin'ny vatana ny rano. Ny triploid ahitra besisika no matetika ampiasaina amin'ny farihy tompon'ny sy ny mpitantana ny manampy amin'ny zavamaniry anaty rano tsy ilaina mifehy. Toa hafahafa ny mampiasa ny trondro toy ny endriky ny fitantanana fako, fa ny ahitra ny masiaka besisika hazoto homana ny zavamaniry mitombo ao na manodidina ny farihy dia ilaina mba hanala ny tsy niriana zavatra organika.
To ihany sy hampiasa io karazana trondro, dia ilaina ny hihazona fahazoan-dalana alohan'ny nametraka azy ireo tao an-kamory na ny farihy. Ny trondro no nifehy ny Departemantan'ny lalao sy Inland Jono izay mpitantana dia afaka hahazo ny fahazoan-dalana. Izany ihany koa ilaina amin'ny besisika ho tsy mamokatra ka tsy ny mamokatra sy Mampidi-doza ny ny farihy na dobo avy eo-mihinana ny zavamaniry.
Araka ny mpiasa ny tontolo iainana, Lake managements mazàna tsy ny fampidirana ny zavamaniry na ny trondro izay tsy teratany ny faritra tahaka izany dia tezitra ny Eco-rafitra. Io karazana besisika, na izany aza, Tena mahasoa na dia eo aza tsy ho tompon-tany tany Amerika Avaratra. Zava-dehibe fa tsara ho ampiasaina ho toy ny fitaovana fitantanana raha toa ka voafidy. Fa ilaina ny sterilize ny trondro rehefa efa lehibe izy ireo no fomba fiasa tsara, saingy misy fepetra fanampiny izay tokony heverina.
Ny iray voalohany dia ny tsy fiheverana overstock ny farihy na dobo miaraka amin'ny besisika. eo ho eo 20%-30% fandrakofana ny faritra mando zavamaniry no ilaina ny kamory ho hita fa mahay mandanjalanja ara-pahasalamana sy ny faritra. Raha ny besisika dia ampiasaina mba hifehy ny zavamaniry tsy ilaina, ny soso-kevitra fa manana ny ampy ny tahiry hihinana be zavamaniry manokana isan'andro, nefa tsy ampy ny hanafoana ny zavamaniry rehetra any an-kamory.
Misy soso-kevitra ihany koa fa fampisehoana any amin'ny tanàna nametraka rafitra ho eo anoloan'ny na niala taminy fitaovana hita eo amin'ny kamory na ny farihy. Raha manolotra ny dobo miaraka amin'ny fitaovana niala taminy, dia mety hamela ny besisika tsy hanam-pahafahana nandritra ny mavesatra ny rano mikoriana. Amin'ny alalan'ny fampisehoana any amin'ny tanàna fametrahana rafitra, azo atao mba hisorohana ny trondro milomano ambany tsy mitondra any amin'ny famonjena ny vola.
Farany, besisika ny ahitra no tena ho ambany feeder ary toy izany ho toy ny fironana mba hamelomanao ny antsanga eo amin'ny kamory ambany. In dobo marivo, izany no miteraka ny tafahoatra habetsahan'ny rano maloto. ny farany, na dia tsy ilaina ny zavamaniry rehetra dia lany ringana, dia mety hiafara amin'ny kamory maloto ankapobeny ary dia mila hisolo ny rano.
Tian'izy Control Zavamaniry Amin'ny Triploid Grass besisika